Ford သည် CATL နှင့် BYD တို့ကို ဘက်ထရီ ပေးသွင်း သူ များအဖြစ် အတည်ပြု သည် - Pandaily
Categories: Auto ကိုPandaily ဒီဇင်ဘာ 7, 2021 ဒီဇင်ဘာ 8, 2021 မှာ Posted
မကြာသေးမီက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူ အစည်းအဝေးတွင် Ford ၏လုပ်ငန်း လည်ပတ် ရေး အရာရှိ ချုပ် Lisa Drake ကပြောကြား ခဲ့သည်Ford သည် ဘက်ထရီ ပေးသွင်း သူ ငါး ဦး နှင့် ဆက်လက် ပူးပေါင်း မည်Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. (CATL), BYD, SK, LG Energy Solutions နှင့် Panasonic တို့ပါဝင်သည်။ “ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ ကမာၻ႔ စြမ္းအား ၂၄၀ ဂ စ္ ဂါ ၀ပ္ နာရီ ကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္း ထား ပါတယ္” ဟု သူမက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ CATL က ကျနော်တို့ကို စတင် ထောက်ပံ့ နေပြီ” လို့ Ford China ကုမ္ပဏီ ရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိ တဦးက အင်္ဂါနေ့က ဘီဘီစီ သတင်းထောက် ကို ပြောပါတယ်။ သတင္းမ်ားအရ CATL က အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား သည္ ေဖာက္ သည္ မ်ား၏ တုံ႔ျပန္ မႈအေပၚ မူတည္ မည္ဟု ဆိုသည္။
Ford အနေဖြင့် နှစ် နှစ်အတွင်း လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်ကို တစ်နှစ်လျှင် ၆၀၀, ၀၀၀ အထိတိုးမြှင့် ရန်စီစဉ် ထားပြီး ကမ္ဘာ့ ဒုတိယ အကြီးဆုံး လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်လာ ရန်လည်း စီစဉ်ထား ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
CATL နှင့် BYD တို့နှင့် တိကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်များကို ထုတ်ဖော်ပြောကြား ခြင်းမရှိသေး သော်လည်း Ford နှင့် SK အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သည်အမေရိကန် ဈေးကွက်တွင် ဦး ဆောင် ဦး ရွက် ပြု ခဲ့သည်။ ယခု အနာဂတ် 240GWh ဘက်ထရီ စွမ်းရည် ၏ကြီးမားသော စျေးကွက် အလားအလာ ကို မျှဝေ ပါ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် Ford သည် လျှပ်စစ် ထရပ်ကား များနှင့် ဘက်ထရီ များ ထုတ်လုပ်ရန် Tennessee နှင့် Kentucky တို့တွင် စက်ရုံ ကြီး နှစ်ခု တည်ဆောက်ရန် SK Innovation နှင့်ပူးပေါင်း မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ စီမံကိန်းအတွက် ပူးတွဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မှာဒေါ်လာ ၁၁. ၄ ဘီလီယံ ဖြစ်ပြီး Ford က ဒေါ်လာ ၇ ဘီလီယံ ထည့်ဝင် မည်ဖြစ်သည်။
Ford သည် Kentucky ရှိ BlueOvalSK Battery Park ဟုခေါ်သော 1500 က ၁၅၀၀ စက်ရုံ တည်ဆောက်ရန် ဒေါ်လာ ၅. ၈ ဘီလီယံ သုံးစွဲ မည်။ ဒီ စက္႐ုံ ကို Ford ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ လွ်ပ္စစ္ ကား ေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဘက္ထရီ ေတြ ထုတ္လုပ္ ရာမွာ အဓိက အသံုးျပဳ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ စက္႐ုံ ကို ၂၀ ၂၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ လည္ပတ္ ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားၿပီး ဒုတိယ စက္႐ုံ ကို ေနာက္ ႏွစ္တြင္ စတင္ လည္ပတ္ ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားသည္။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:NIO နှင့် Ford အမှုဆောင် ဟောင်း Zhu Jiang သည် Jidu တွင် ဒု ဥက္က president ္ဌ အဖြစ် ဝင်ရောက် ခဲ့သည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် Ford သည်၎င်း၏ Capital Markets Day တွင် လက်ရှိ စီးပွားရေး ပုံစံ မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးသော စီးပွားရေး ပုံစံ သို့ပြောင်းလဲ လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် လျှပ်စစ် ကား များ၏ ရောင်းအား သည် ကုမ္ပဏီ ၏စုစုပေါင်း ရောင်းအား ၏ ၄၀% သာရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Ford သည် ၂၀ ၂၅ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၃၀ ကျော် အထိ လျှပ်စစ်ဓာတ် အားပေး ရေးလုပ်ငန်း အတွက် အသုံးစရိတ် ခန့်မှန်း ချက်ကို တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
Tags: *CATL | Battery Maker | BYD* | electric vehicle | Ford